MOFED - Development Indicators Sign In
MOFED > Afan Oromo > Odeeffanno > Guddina Kan Mul’isuu
Guddina kan mul’isuu
Haala Guddina,Hiyyummaa fi Nageenya <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" />
· Rawatiin Itoophiya stratejii dhabinsa barnoota kan walda humu haala posotivii ta’een dinagdee isa gudda ykan akkasumas dinagiddee hawaasa kan mulisudha. · Waggoota dhiyoot, dinagiddeen Itoophiya kan galm’ee ciminan posotivii foyyainsa(giduugaessa kan wagga kan dhuga GDP persentin guddina 11.8% yeroo waggoota shaman darban hanga dhuma 2007/08).kunis kan fayyu bara 2002/3 irra kasee kan bu’aan isa negativii ta’ee real GDP guddina arititin pesenti 2.1% nita’a.fooyya’iinsi saa fagoo ol’aana SSA jiduugalesa 5.2% dha bara2007/08. · Guddin Itoophiyan kara galii kaptalatiin,waggoota shaman darbaniff ,jidugalesa biyyoota saharadha gadii jiran caalera.akka kapitala GDP kan ga’uu USD$205 dha kan bara 2007/8 USD$140 dha kan waggoota shaman darbanii; · Guddina Itoophiya kan dursamuu sekteera qonatidhan yata’uu male kan xumuramuu huminna gudadhan foyyefamuu kara omishatiin, ijara fi sekteera tajajila.kessuma ijarisii kan dursuu danda’uu yeroo fedhiin uummata dabaluf sekteeri investimentii fi misooma bu’uraa nidabala;
· Sekteeri qonna kan galm’uu kandabale persentidhan 7.5% dha kan bara 2007/08 akasumas kan bara 2008/09 kan dabale guddin qonna persentii 6(%)nidha.
· Kara Industriitin ilalchisee tajajili sekteera industriitin kan bara 2007/08,Industriin fi tajajili sekteera guddin innii gallmesse 10.4% fi 17.0% tidha akka duraaf’aantee tii.Innis bayye irra kan caluu kan galma’ee dursa bara 2006/07;
· Guddin Industrii fi tajajila kan guddatuu persentidhan 10.6 fi 17.3 akka duraaf’aantee yeroo bara baajetaa 2008/09.
· Akkumaa kanaat,waliigala GDP karoora guddina 11.2% yeroo bara baajetaa 2008/09.
· Dinagidden kan hawaasa Itoophiya kan mulisuu foyyefameera.kessuma ,guddin inni jalaqaba hojiin isa gaba akka dabaluu tasiseera;offirra dhoowiina kan fudhatuu bal’atera .kara nyataa uummatatinis foyyefammeera; fi hanqina nyata uummatin warrii qaban xinachaa jjiira kesuuma kan bara 1990/00 fi bara 2004/05 bayyisee gadbu’eera kara nannolee badyyatin.